आगामी डरलाग्दो चलचित्रहरू तपाईं यस गर्मीमा मिस गर्न चाहनुहुन्न - iHorror
घर	सूची	आगामी डरलाग्दो चलचित्रहरू तपाईं यस गर्मीमा मिस गर्न चाहनुहुन्न
आगामी डरलाग्दो चलचित्रहरू तपाईं यस गर्मीमा मिस गर्न चाहनुहुन्न
by एन्थोनी Pernicka 25 सक्छ, 2022
by एन्थोनी Pernicka 25 सक्छ, 2022 7,977 हेराइहरू
यदि तपाईं डरलाग्दो मुडमा हुनुहुन्छ भने, ठूलो पर्दामा आउँदै गरेको सबैभन्दा लोकप्रिय नयाँ डरलाग्दो चलचित्रहरूको यो रनडाउनको लागि तयार हुनुहोस्। केली म्याकनी, यहाँ एक वरिष्ठ लेखक iHorror.com यस गर्मीमा दर्शकहरूले के हेर्न चाहन्छन् भन्ने उनको सूची साझा गर्दछ!
आगामी डरलाग्दो चलचित्रहरू जुन तपाईं यो समर २०२२ मिस गर्न चाहनुहुन्न:
यस गर्मीमा धेरै उत्कृष्ट डराउने चलचित्रहरू बाहिर आउँदैछन्।
तपाइँको डरलाग्दो चलचित्र हेर्नु पर्ने सूचीमा के थप्ने केलीको छनोटहरू यहाँ छन्। कुनै विशेष क्रम मा:
MEN - थिएटरहरूमा मे २० मा
व्यक्तिगत त्रासदी पछि, हार्पर सुन्दर अंग्रेजी ग्रामीण इलाकामा एक्लै पछि हट्छन्, निको पार्ने ठाउँ खोज्ने आशामा। तर, वरपरको जङ्गलबाट कोही वा केहीले उनलाई पछ्याइरहेको देखिन्छ। डरलाग्दो डरको रूपमा सुरु हुने कुरा चाँडै नै पूर्ण रूपमा बनेको दुःस्वप्नमा परिणत हुन्छ, जसमा उनको सबैभन्दा कालो सम्झना र डरहरू छन्।
लेखक/निर्देशक एलेक्स गारल्याण्डबाट, एकेडेमी अवार्ड मनोनीत जेसी बकले र रोरी किनियरले अभिनय गरेका छन्।
कालो फोन - थिएटरहरूमा जुन 24
फोन मरेको छ। र यो बजिरहेको छ।
निर्देशक स्कट डेरिकसन नयाँ डरलाग्दो थ्रिलरको साथ विधाको अग्रणी ब्रान्ड, ब्लमहाउससँग फेरि आफ्नो आतंकको जरा र साझेदारहरूमा फर्किन्छन्।
फिन्नी श, एक शर्मीली तर चतुर १३ बर्षीय केटा, एक दु: खद हत्यारा द्वारा अपहरण गरीएको छ र एक ध्वनिरोधी तहखाने मा फसेको छ जहाँ चिच्याउने थोरै उपयोग को छ। जब भित्ता मा एक डिस्कनेक्ट फोन घण्टी बज्न थाल्छ, Finney थाहा छ कि उनी हत्यारा को अघिल्लो पीडित को आवाज सुन्न सक्छन्। र उनीहरु यो कुरा सुनिश्चित गर्न मा मरेका छन कि उनीहरुलाई के भएको थियो फिन्नी को लागी हुँदैन।
आफ्नो क्यारियरको सबैभन्दा डरलाग्दो भूमिकामा चार पटकको Oscar® मनोनीत इथान हकलाई अभिनय गर्दै र उनको पहिलो-समयको फिल्म भूमिकामा मेसन टेम्सलाई प्रस्तुत गर्दै, The Black Phone को लेखक-निर्देशक स्कट डेरिक्सन द्वारा निर्माण, निर्देशन र सह-लेखन गरिएको हो। सिनिस्टर, एमिली रोज र मार्वलको डाक्टर स्ट्रेन्जको एक्सोर्सिज्म।
होइन - थिएटरहरूमा जुलाई 22
"नराम्रो चमत्कार के हो?"
क्यालिफोर्नियाको घोडा खेतमा हेरचाह गर्नेहरूले एउटा रहस्यमय शक्तिको सामना गर्छन् जसले मानव र जनावरहरूको व्यवहारलाई असर गर्छ।
Oscar® विजेता Jordan Peele ले आधुनिक डरलाग्दो कुरालाई अवरुद्ध र पुन: परिभाषित गरे बाहिर जाऊ अनि तेस्पछि Us। अब, उसले नयाँ पप दुःस्वप्नको साथ ग्रीष्मकालीन चलचित्रको पुन: कल्पना गर्दछ: विस्तारित डरलाग्दो महाकाव्य, होइन.